Nidaamkayagu waa inaan aayar bilowno, sameyno xiriir, oo aan xagaa kasii wadno.
Si aad Shuraako uga codsato maalgelin, waa inaad buuxisaa shuruudahan soo socda.
Ganacsi Soomaali ah
Ganacsi aad u yar, mid yar ama mid dhexdhexaad ah (0-300 shaqaale)
Shirkadahu waa inay leeyihiin ugu yaraan hal (1) sanno oo hawlgal ah waana inay ku jiraan qayb ganacsi oo aan xayiraadi saarnayn sida ay daabacaan ama wax uga beddelaan waqti ilaa ka waqti Qaramada Midoobay ama Midowga Yurub
Shirkad bulsho ahaan iyo deegaan ahaanba masuul ah oo horseeda shaqo abuur lehna qaab ganacsi oo aad u fiican
Maalgalinta ilaa iyo haddu waxay u dhaxaysay USD $5,000 ilaa USD $750,000, taas oo ku saleysan awoodda hindisaha. Maalgashiga rajada fiican leh ee u baahan xaddi raasumaal oo weyn waa la tixgelin doonaa. Ma bixino maaliyad loogu talogalay raasumaalka shaqada/hawlgalka ganacsiga.
Haddii aad tahay ganacsi Soomaaliyeed oo aad daneynayso inaad hesho maalgelin iyada oo loo marayo adeegga Shuraako, fadlan soo gudbi Macluumaadka Fikrada ee aad buuxisay ama nagala soo xiriir info@shuraako.org wixii macluumaad dheeraad ah.